အင်္ဂလိပ်ဘာသာလေ့လာသူများအတွက်ရှောင်ရန် ၉ ချက် - Myanmar Network
အင်္ဂလိပ်ဘာသာလေ့လာသူများအတွက်ရှောင်ရန် ၉ ချက်
Posted by zar ni (My Way!) on December 4, 2011 at 12:57 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်မျိုးချစ်ရဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်။ “ကျိန်းသေပေါက်အင်္ဂလိပ်စာတတ်နည်းတော့ မပေးတတ်ဘူး။ ကျိန်းသေပေါက်မတတ်မယ့်နည်းတော့ရှိတဲ့။ အဲဒါ မီးနင်းအလွတ်ကျက်တဲ့နည်းပဲ” တဲ့။
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေတဲ့ဘ၀တူများအတွက်တိုတိုထွာထွာလေးတွေရေးလာလိုက်တာအားလုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ တစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ Dos တွေချည်းပဲများနေပါတယ်။ ဆောင်ရန်နဲ့ရှောင်ရန် မှာ ဆောင်ရန်တွေပဲရေးနေသလိုဖြစ်နေတယ်။ ရှောင်ရန်လေးတွေလည်း ရေးသင့်တယ်လို့ယူဆလို့ ဒီတစ်ခါတော့ John Fotheringham ရဲ့ A Not To Do List for Successful Language Learners ဟာကိုယ်ပြောချင်တာတွေနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေလို့ သူ့ကိုပဲအခြေခံရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ရှောင်ရန်၁။ Do Not spend more than 5% of your study time on grammar, translation, vocabulary list or any other overt information about the language.
ကိုယ်လေ့လာချိန်ရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုပြီး သဒ္ဒါ၊ ဘာသာပြန်ခြင်း၊ ဝေါဟာရအစုလိုက်ကျက်ခြင်း၊ နဲ့ကိုယ်လေ့လာနေတဲ့ဘာသာစကားအကြောင်းရေးထားတာတွေမှာအချိန်မကုန်ပါစေနဲ့။
ဘာသာစကားဆိုတာ စိမ့်ဝင်ရယူရတာမျိုးပါ။ Acquisition ဆိုတာ တမင်တကာလေ့လာခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ language input ကို မသိစိတ်ကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်နဲ့ အမျှအနည်ထိုင်စုပုံ လာစေခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရီးယားကားတွေကြည့်ရင်း ကိုရီးယားစကားတစ်ချို့ကို နားလည်လာသ လိုမျိုးပေါ့။ တမင်လေ့လာတာမဟုတ်ပေမယ့် နားထောင်ပါများတဲ့အခါ စိတ်ထဲစွဲထင်လာတာမျိုး။ ဒါကြောင့်မလို့ တမင်လေ့လာတာက ၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကျန်တဲ့ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် acquire ရယူတဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ၀တ္ထု ပုံပြင်ဖတ်တာမျိုး၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်တာမျိုး၊ သီချင်းနားထောင်တာမျိုး လုပ်ပါတဲ့။
ရှောင်ရန် ၂။ Do Not spend time on material that are too difficult of don't interest you
ကိုယ့်အတွက်ခက်ခဲလွန်းသောအကြောင်းအရာ (သို့မဟုတ်) ကိုယ်စိတ်မ၀င်စားသော အကြောင်းအရာများ တွင်အချိန်မဖြုန်းပါနဲ့။
နိုင်ငံခြားဘာသာစကားတစ်ခုလေ့လာရာမှာ (motivation) သိလိုတတ်လိုစိတ်တက်ကြွနေတဲ့ အခါအောင်မြင်မှုလည်းကြီးမားပါတယ်။ ၄င်းစေ့စော်စိတ်ကို အချိန်မရွေးတဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်စေတဲ့ အရာကတော့စိတ်ဝင်စားမှုပါပဲ။ စိတ်မ၀င်စားတဲ့အရာကိုလုပ်ရာတာကြီးမားတဲ့ fatigue ဖြစ်ပေမယ့်ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာရေးထားတဲ့စာဖတ်ရရင် အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှန်းတောင် သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ စိတ်မ၀င်စားတာကိုမဖတ်နဲ့။ အရမ်းခက်တာကိုမဖတ်နဲ့။
ရှောင်ရန် ၃။ Do Not study long, infrequent session
တစ်ခါစာကြည့်ရင် အချိန်အကြာကြီးကြည့်ပြီး ကြည့်တဲ့အခါကြည့်လိုက်၊ မေ့သွားလောက်ရှိမှ ပြန်လေ့လာလိုက်မလုပ်နဲ့။
ဒီအကြောင်းကတော့ ပြောရတာအပ်ကြောင်းတောင်ထပ်နေပြီနဲ့တူပါတယ်။ motivation အပြင်အရေးကြီးတာက consistency ပုံမှန်လေ့လာဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကို နှစ်နာရီလောက် စနေတနင်္ဂနွေ သင်တန်းလေးတက်လေ့လာတာထက် တစ်နေ့ကို မိနစ်၂၀ လောက် တပတ်ခြောက်ရက်လောက် ပုံမှန်လေးလေ့လာသွားတာကို အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်။
ရှောင်ရန် ၄။ Do Not worry about speaking too soon.
ခဏလေးနဲ့ စကားပြောတတ်ဖို့ ဆန္ဒမစောပါနဲ့။
လေ့လာသူအများစုရဲ့မူလပန်းတိုင်က အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ဖို့ပဲဖြစ်မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ဦးနှောက်ထဲ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ဝေါဟာရတွေ၊ စကားစုတွေ၊ ကို စကားအဖြစ်ပြန်ထုတ်နိုင်ဖို့ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု အထိယူရပါတယ်။ ဦးနှောက်ထဲမှာ input လုံလုံလောက်လောက်မရှိသေးဘဲနဲ့ output ပြန်ထုတ်ဖို့ဆိုတာခက်မှာပါ။ ကလေးငယ်တွေဟာသူတို့ရဲ့မပီကလာပီကလာစကားလေးတစ်ခွန်းစနှစ်ခွန်းစေပြော နိုင်ဖို့ မိဘဆွေမျိုးတွေက babytalk လို့ပဲခေါ်ခေါ် infant-directed speech (IDS) or child-directed speech (CDS) လို့ပဲခေါ်ခေါ် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပီပီသသပြောပြနေတာကို ၂ နှစ်ခန့်နားထောင်ခဲ့ရ တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ လူကြီးတွေအတွက်ဒီလောက်လိုအပ်မှာမဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်မပြောနိုင်သေးတာကိုစိတ်ပျက်နေစရာမလိုပါဘူး။ သူများပြောတာနားလည်အောင်အရင်လုပ်ရပါဦးမယ်။ ဒါဟာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း တွေမှာတော့ပြဿနာကြီးတစ်ခုပါပဲ။ ကျောင်းသားတွေအဆင်သင့်မဖြစ်ခင်မှာ တစ်ခွန်းသင် တစ်ခွန်းပြန်ပြော ခိုင်းတဲ့အခါမပြောနိုင်တဲ့ကျောင်းသားက စိတ်ညစ်ပြီးကျောင်းပြေးတော့တာပဲ။ သင်တန်းကျောင်းတွေဘက်မှာ လည်း ဈေးကွက်အနေအထား၊ resource အကန့်အသတ်တွေနဲ့ဆိုတော့ သူတို့လည်း အခက်အခဲရှိ မှာပဲလေ ။ ထိုင်းနိုင်ငံက AUA သင်တန်းကျောင်းဆိုရင် ထိုင်းစကားလာသင်တဲ့ကျောင်းသားတွေ ကို ပထမ တစ်လနှစ်လလောက်မှာ စကားလုံးဝမပြောခိုင်းဘဲနဲ့ ဆရာတွေ ALG method နဲ့သင်ပြပေးတာကို နားထောင် ဆရာတွေမေးတာကို တစ်ခွန်းစနှစ်ခွန်းစလောက်ပဲပြန်ပြော ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့သင်တာတွေ့ဖူးတယ်။
ရှောင်ရန် ၅။ Do Not memorize vocabulary out of context.
စကားလုံးတစ်လုံးမှာအဓိပ္ပါယ်တွေအများကြီးရှိလို့ နမူနာစာကြောင်းမပါဘဲ နဲ့သူ့ချည်းသက်သက်မှတ်တာ မျိုးဟာအချိန်ကုန် လူပန်းပါတယ်။ အေ-ပီ-ပီ-အယ်လ်-အီး အက်ပဲလ် ပန်းသီး ဆိုပြီးကျက်ထားခဲ့တာ He is such an apple polisher. ဆိုတဲ့ဝါကျကိုတော့ မျက်နှာလိုမျက်နှာရလုပ်တတ်တဲ့သူ၊ There always isarotten apple to spoil it for the rest of us. ကျတော့ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့်တစ်လှေလုံးပုပ်တယ်။ Miranda is the apple of my eye ကျတော့ အချစ်ဆုံးသူ စသည်ဖြင့် ခွဲခြားသိနိုင်အောင် နမူနာဝါကျနဲ့တွဲမှတ်ရပါမယ်။
ရှောင်ရန် ၆။ Do Not over rely on the written words.
တတ်နိုင်သမျှ အခြေအနေပေးတဲ့အခါတိုင်း မဖတ်ခင် အရင်နားထောင်နိုင်ဖို့ကျိုးစားပါ။ ဟိုးအရင်တုန်းကတော့ authentic listening input ရဖို့ခက်ခဲပါတယ်။ ဆရာဆရာမတွေသည်သာ source of listening input ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆရာက သဲယား လုပ်ရင် ကျောင်းသားတွေလည်း သဲယားလိုက်ဖြစ်ကုန်တာပေါ့။ အခုအင်တာနက်ခေတ်မှာ ဒါဟာလွယ်ကူသွားပါပြီ။ အသံကိုနားထောင်ပြီး စာသားပါလိုက်ဖတ်နိုင်တဲ့အင်တာနက်ဆိုက်တွေအများကြီးရှိနေပါပြီ။ ပုံနှိပ်စာလုံးက စာလုံးပေါင်းကိုပဲသိနိုင်ပါတယ်။ နားထောင်ခြင်းကတော့ အသံထွက်၊ အဖြတ်အတောက်၊ လေယူလေသိမ်း စတာတွေကိုသိနိုင်ပါတယ်။ အရင်နားထောင်ပြီးမှဖတ်ခြင်းအားဖြင့် ပိုအကျိုးရှိဖို့သာမြင်ပါတယ်။
ရှောင်ရန် ၇။ Do Not look up words before making at least one full pass through each reading or listening material (or each section for longer pieces.)
အဖတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် နားထောင်ရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မသိတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို ချက်ခြင်းမရှာပါနဲ့။
comprehension ဆိုရာမှာ စာတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပါယ်၊ စာတစ်ကြောင်းချင်းရဲ့အဓိပ္ပါယ်ထက် စာတစ်ပိုဒ် (သို့) ကဏ္ဍတစ်ပိုင်းကိုခြုံငုံနားလည်ခြင်းကပိုလိုအပ်ပါတယ်။ (ဥပဒေကဲ့သို့သော တစ်လုံးချင်းအသးစိတ်နားလည်ရမည့် စာမျိုးကိုတော့မဆိုလိုပါ။) စာတစ်မျက်နှာကိုတစ်ကြိမ်ဖတ်သွား၊ မသိတဲ့စကားလုံးကို ခန့်မှန်းကြည့်၊ ခြုံငုံပြီးတော့ နားလည်အောင်ကျိုးစား။ သိပ်နားမလည်သေးရင် နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ဖတ်။ ဒီလိုမျိုးနဲ့ အနည်းဆုံးနှစ်ကြိမ်လောက်ကျိုးစားလိုက်ရင်နားလည်လာပါလိမ့်မည်။ တစ်ချို့စကားလုံးတွေဟာ စာပိုဒ်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုသိဖို့ သိပ်အထောက်အကူမပြုဘူးဆိုရင်ရှာ မကြည့်ဘဲ ကျော်သင့်ကကျော်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရှောင်ရန် ၈။ Do Not let the “affective filter “ putadamper on your language learning.
“affective filter” ကြောင့်ဘာသာစကားလေ့လာရေးကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်ပါစေနဲ့။
“affective filter” ဆိုတာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောတရားလေးတစ်ခုကို စကားလုံးလှလှလေးနဲ့သုံးထားတာပါပဲ။ ဒီလိုပါ။ မိမိရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်က ဘာသာစကားလေ့လာမှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့။ (တခြားကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာများမှာလည်းအတူတူပါပဲ။) ကိုယ်ဟာ စိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်၊ ဒေါသထွက်နေမယ်၊ ဆာလောင်နေမယ်၊ မနေ့ညကဖြစ်ခဲ့တဲ့ကတောက်ကဆက ဒီနေ့အထိစိတ်ထဲမှာနေရာယူနေမယ်ဆိုရင် လေ့လာမှုမှာဘယ်လိုမှ အာရုံစိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမှာရှက်နေကြောက်နေတတ်တဲ့ သူတစ်ချို့ ယမကာလေးနည်းနည်းထွေလာတဲ့အခါ အင်္ဂလိပ်လိုရဲရဲတင်းတင်းပြောနိုင်ကြတာတွေ့ဖူးမှာပါ။ ဒါဟာ less inhibition စိုးရွံ့စိတ်လျော့နည်းသွားတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။ (inhibition ကိုဥပမာပြတာပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောနိုင်ဖို့ အရက်သေစာသောက်ဖို့တိုက်တွန်းခြင်းလုံးဝမဟုတ်ပါ။) မိမိကို inhibition ဖြစ်စေသောအခြေအနေမျိုးကိုရှောင်လွှဲနိုင်ပါစေ။ ကိုယ့်ကို တခြားကျောင်းသားတွေရှေ့မှာ အရှက်ရစေမယ်၊ ဟာသဖြစ်စေမယ်ဆိုရင် အဲဒီဆရာကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်နဲ့စကားပြောလေ့ကျင့်ဖက်က ကိုယ့်အမှားကိုဟာသလုပ်မယ်၊ သီးမခံနိုင်ဘူးဆိုရင် တခြားအဖော်တစ်ယောက်ရှာပါ။ စကားပြောဖို့ကြောက်စေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ အမှားအယွင်းကိုအားမပေးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာသာစကားစွမ်းရည်တိုးတက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ရှောင်ရန် ၉။ Do Not forget to have some fun.
All work and no play makes Jackadull boy ဆိုတဲ့စကားလို စာတွေချည်းပဲအရမ်းလေ့လာ၊ သိပ်ပြီးအလေးအနက်ထားလွန်းတဲ့အခါ လူမှုရေးအားနည်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဘာသာစကားဆိုတာ လူမှုဆက်ဆံရေးနဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတော့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေ့လာသွားနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်လိုပဲအင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီး အတွေ့အကြုံတွေ ဖလှယ်၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်၊ သီချင်းနားထောင် ရောက်တတ်ရာရာ အင်္ဂလိပ်လိုကျိုးစားပြောပြီး တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ စွမ်းရည်တွေတိုးတက်နိုင်ကြပါစေ။
အရင်post တွေထဲမှာရေးထားတဲ့အချက်တွေပဲအပ်ကြောင်းထပ်သလိုဖြစ်နေရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ ပြောစရာကလည်း ဒီအကြောင်းတွေချည်းဖြစ်နေတော့ တစ်မျိုးလှည့်ပြီးပြောရတာပါပဲ။ အရင်ဟာတွေမဖတ်ဖူးသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့။
Permalink Reply by Diamond on December 5, 2011 at 7:45
တကယ်ကောင်းတဲ့ စာလေးတွေပါ တို့တော့ အရမ်းသဘောကျပါတယ် ဒီိလိုလမ်းညွှန်မှုမျိုးကို များများဖတ်ချင်ပါတယ် တို့အတွက်အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ် လေးစားစွာ နဲ့ အားပေးလျှက်ပါ
Permalink Reply by tin zar on December 5, 2011 at 10:58
Permalink Reply by michaeltunlinaung on December 5, 2011 at 15:06
Permalink Reply by Kodomo Kit on December 5, 2011 at 16:24
thanks for ur guidelines
Permalink Reply by 15lp3e11kde1d on December 5, 2011 at 16:38
Permalink Reply by 2n5x8tz27qgug on December 6, 2011 at 7:15
Good new knowledge for me.
Permalink Reply by tun lwin on December 6, 2011 at 9:49
While we are on wrong ways to language studying, you guide us to the right way. Ko Zar Ni, all your "Do Not.." is really "DO."
Permalink Reply by kaykhineoo1987@gmail.com on December 6, 2011 at 10:45
Permalink Reply by Thae Swe Zin on December 6, 2011 at 10:57
myanmar net work is the apple of my eye.. :)
Permalink Reply by ZAR NI NYI NYI KYAW on December 6, 2011 at 10:57
Permalink Reply by Su Su Tun on December 6, 2011 at 10:57
your interesting article.
Permalink Reply by 0suqqwq5grfie on December 6, 2011 at 11:35
Thanks for your Excellent Guide for us !!!